China Acetyl Octapeptide-3 factory na-emepụta | JYMed
Product aha: Acetyl Octapeptide-3
Molekụla Formula: C42H72N16O15S
Molekụla arọ: 1073.195 g / mol
Ngwa: Anti ịka nká na mgbochi ndọlị. Belata miri wrinkles na edoghi na-erukwa na gburugburu n'egedege ihu na anya.
Anyị nwere a ukwuu oru oma otu obibi ase si ahịa. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ "100% ahịa afọ ojuju site na anyị ngwaahịa mma, price & anyị otu ọrụ" na-enwe aha ọma n'etiti ahịa. Na ọtụtụ ụlọ mmepụta ihe, anyị nwere ike inye a dịgasị iche iche nke One nke kacha ekpo ọkụ ugbu maka Anti ndọlị Acetyl Octapeptide-3 Cas 868844-74-0 snap 8, Special mesiri ike na mkpo ahịa zere ihe ọ bụla mebiri n'oge njem, zuru ezu anya ka ndị bara uru nzaghachi na Atụmatụ anyị kpọrọ ahịa.